यी वेबसाइट हेरे पछि तपाईं पेट मिची मिची हाँस्नुहुन्छ ! « News24 : Premium News Channel
यी वेबसाइट हेरे पछि तपाईं पेट मिची मिची हाँस्नुहुन्छ !
दिनहु जस्तो कामको व्यस्तता र आधुनिकतासँगै बढेका आवश्यकताले मानिसलाई हमेशा दुखी बनाइरहेको छ। सुख र हाँसो भन्दा पनि दुख हुनुपर्ने कारणहरु बढी भएकाले मानिसको जिवनमा हाँसोको मात्र कम हुँदै गएको छ। लफ्टर थेरापीका रुपमा हाँसोलाई स्वास्थ्यसँग जोड्ने गरिए पनि अवसर भने निक्कै कम छन्। यहाँ यस्ता वेबसाइटका बारेमा उल्लेख गरिएको छ जसले तपाइँलाई हाँस्ने मौका दिन्छन्। तपाइँ थोरै सेन्स अफ हृयुमर भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने इन्टरनेट र त्यसमा उपलब्ध वेबसाइटहरु तपाइँका लागि हँसाउन तयार छन्। हाँसो, खुसी रहन कसलाई मन पर्दैन र।तर त्यसै हाँसो आउँदैन।तर जतिसुकै रिस उठेको भएपनि त्यसलाई हाँसोमा बदल्नका लागि केही यस्ता वेबसाइट छन् जसले तपाइँको अनुहारमा हाँसोका रंगहरु छरिदिन्छन्।
टेक्स्टस् फ्रमलास्टनाइटडटकम textsfromlastnight.com : जसलाई एमएमएसमा रुचि छ त्यसका लागि यो वेबसाइट उत्तम गन्तव्य हो। यसमा वेब ठेगाना जस्तै एसएमएस नै एसएमएस छन्। यहाँ निक्कै रमाइला र हाँसो उठाउने एसएमएसको भण्डार नै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। यसमा विश्वभरका एसएमएस पाउन सकिन्छ। यी वेब साइड हेर्नुस र रमाउनुस ।